अपरिचितसँग नजिकिँदा...- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
साइबर अपराधका ९ सय ३७ उजुरीमध्ये ९ सय ६ वटा उजुरी फेसबुकसम्बन्धी अपराधका छन्
माघ २, २०७६ लीला श्रेष्ठ
काठमाडौँ — नागार्जुन–४ की एक युवतीको फेसबुकमा अपरिचितले म्यासेज पठाए । फेसबुक ह्याक गर्न म्यासेन्जरमा फिसिङ लिंक पठाइएको थियो । सोही लिंकका आधारमा युवतीको फेसबुक ह्याक भयो । त्यसपछि अपरिचितले च्याटबाटै युवतीका अन्य साथीसँग रकम मागे । त्यही सूचनाका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अघिल्लो साता पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–३ नदीपुरका २० वर्षीय रोशन हमाल ठकुरीलाई पक्राउ गर्‍यो ।
ब्युरोका अनुसार ठकुरीलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ७ दिन म्याद थपेर साइबर अपराध कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
नक्कली एकाउन्ट बनाई म्यासेन्जरमा ब्ल्याक मेल गरेर रकम माग्ने झापाका खडानन्द काफ्लेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले मंसिर १० मा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्‍यो । काफ्लेले सुनसरी इटहरीका युवराज बस्नेतलाई फेसबुकमार्फत साथी बनाएका थिए । उनीहरूबीच बेलाबेलामा कुराकानी हुन्थ्यो । कुराकानीका क्रममा आफ्नो गोप्य अंग देखाएको, अश्लील भिडियो बनाइदिन्छु भन्दै ब्ल्याक मेल गरेको भेटिएपछि उनी गत असोज ८ मा समातिए । त्यस्तै, बाजुरा गौमुन–६ का १८ वर्षीय विशालजंग रोकायाले सूर्यविनायक नगरपालिका–२ बालकोटकी १३ वर्षीया किशोरीलाई फेसबुकमार्फत साथी बनाए ।
ललाइफकाई प्रलोभनमा पारेर फोटो खिचाए । किशोरीको फोटो प्रयोग गरेर फेक फेसबुक आईडी बनाई रोकायाले सामाजिक सञ्जालमा अश्लील शब्द पोस्ट गरेको, अश्लील म्यासेज पठाई चरित्र हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले शुक्रबार नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ परेका रोकायालाई शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराबाट जबरजस्ती करणी मुद्दामा कारबाही थालेको छ । सप्तरीका शिवनारायण महत्तो प्रधानमन्त्री केपी ओली र डा. सिके राउतको फोटो जोडी परिवर्तन गरी फेसबुकमार्फत सेयर गरेको आरोपमा कात्तिक २५ मा पक्राउ परे । महतोलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले मंसिर १० मा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ ।
यी घटना त उदाहरण मात्र हुन् । इन्टरनेट तथा प्रविधिको बढ्दो लोकप्रियतासँगै चुनौती पनि थपिँदै गएका छन् । यसको दुरुपयोग मात्र नभई यससम्बन्धी गम्भीर किसिमका अपराध पनि बढ्दै गएको प्रहरीको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध बढेपछि प्रहरीले साइबर ब्युरो नै खडा गरेको छ । नेपालमा निकै लोकप्रिय बनेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकसम्बन्धी अपराध बढेको प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय साइबर ब्युरो प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) विकास श्रेष्ठले बताए । चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को ६ महिनामा साइबर अपराधका ९ सय ३७ वटा उजुरी ब्युरोमा पेस भएको उनले बताए । जसमध्ये ९ सय ६ वटा उजुरी फेसबुकसम्बन्धी अपराधका छन् । ५ इन्स्ट्राग्राम, ४ वटा भाइबर र अन्य २२ छन् ।
केन्द्रीय साइबर ब्युरो स्थापनाको ८ महिनामा १ हजार ८ वटा उजुरी परेका छन् । ब्युरोका अनुसार साइबर अपराधमा फेसबुकसम्बन्धी उजुरी बढ्दै गएका छन् । गत आवमा साइबर अपराधसम्बन्धी ३ सय ५७ वटा उजुरी परेकामा त्यसमध्ये १ सय ७१ वटा फेसबुकसम्बन्धी मात्र छन् । फेसबुकबाट विभिन्न व्यक्तिको चरित्रहत्या हुने किसिमका सामग्री पोस्ट गर्ने, अश्लील फोटो ट्याग गर्ने, नक्कली फेसबुक अकाउन्ट बनाउने जस्ता उजुरी परेको डीआईजी श्रेष्ठले बताए ।
हेलो सरकारमार्फत मात्र चालु आर्थिक वर्षमा १४ वटा फेसबुक अपराधको उजुरी परेको तथ्यांक ब्युरोसँग छ । काठमाडौंमा मात्र मुद्दा दर्ता हुने हुँदा साइबर अपराधको न्यायिक पहुँच उपत्यकाबाहिर न्यून छ । उजुरी र न्यायका लागि काठमाडौं आइपुग्नुपर्ने झन्झटले पीडितहरू न्यायबाट टाढै छन् । उपत्यकाबाहिर सेवा प्रवाहका लागि जनशक्ति तथा साधनस्रोतको कमी भएको ब्युरोको भनाइ छ । साइबर अपराधसम्बन्धी प्रस्ट कानुनी प्रावधान छैन । यसबाहेक संस्थागत क्षमता बलियो भइसकेको अवस्था छैन । मुलुकभरका विद्युतीय अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने एकल निकायका रूपमा काठमाडौं जिल्ला अदालत मात्र छ । ०६४ देखि काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई साइबर अपराधको क्षेत्राधिकार तोकिएकोमा एउटै मात्र अदालत भएका कारण यसबाट पाइने न्याय ढिलो, खर्चिलो, झन्झटिलो हुनुका साथै सहर पहुँचमा नभएको सरोकारवाला व्यक्तिको गुनासो छ ।
इन्टरनेट तथा प्रविधिको बढ्दो लोकप्रियतासँगै बढेको साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि प्रयोगकर्ता आफैं सचेत हुनुपर्ने डीआईजी श्रेष्ठको सुझाव छ । ‘आफ्नो पासवर्ड कसैलाई दिनु हुँदैन, समय–समयमा परिवर्तन गरिरहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘इमेलमा काम गरिसकेपछि साइन आउट गर्नुपर्छ ।’ सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक तस्बिर राख्ने, व्यक्तिगत विवरण राख्ने, अपरिचित व्यक्ति वा संस्थाबाट आएको इमेल नखोल्ने, इमेल तथा मोबाइलमा आउन सक्ने आकर्षक उपहार चिट्ठाको भर नपर्ने, मेल वा मेसेन्जरमा आएको अनावश्यक लिंक नखोल्नेलगायत कार्य गरे मात्र पनि अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
प्रत्येक कम्प्युटर प्रयोगकर्ताले सेक्युरिटी सफ्टवेयरहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने, विद्युतीय उपकरणमार्फत कुनै पनि अश्लील सामग्री आदानप्रदान गर्न नहुने प्रहरीको सुझाव छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा युजरहरूको इन्फरमेसनबाट समेत अपराधीको मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरूले जानकारी लिई अपराध गरेको पाइएकाले प्राइभेसी सेटिङमा पब्लिक नगरी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित हुने डीआईजी श्रेष्ठले बताए । प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०९:०४
पुत्रवियोग भुल्न समाजसेवा
‘९ महिनामै दुई छोरा गुमाएको पीडाले परिवार नै सिध्याउने सोचमा पुगेको थिएँ, श्रीमतीको सल्लाहले समाजसेवामा लाग्न प्रेरित गर्‍यो’
माघ २, २०७६ नगेन्द्र अधिकारी
(कोसीपारि, काभ्रे) — मनमा आएको त्यो ‘गलत’ सोच पूरा गरेको भए आज उनी यो संसारमा हुँदैन थिए । नौ महिनाको अवधिमा लक्का जवान दुवै छोरा गुमाउँदा कसलाई पीडा हुँदैन र ? ८७ वर्षीय बुबा, ८४ वर्षीया आमा, श्रीमती लक्ष्मी, छोरा कृष्ण, छोरी स्वातिसहित परिवारका सबै सदस्यलाई भोटेकोसीमा गाडीसहित खसाल्ने योजना बनाएका थिए, विष्णु गौतमले । तर पत्नीको एउटा प्रस्तावले उनको मन मोडियो । टेलिभिजनमा आएको एउटा दृश्य नै ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बनिदियो ।
गोरखामा भएको सवारी दुर्घटनामा मेरुदण्डमा चोट लागेको एक वृद्ध बाबु सोही दुर्घटनामा मृत्यु भएका आफ्ना छोरासम्म पुग्न चाहन्थे तर सकिरहेका थिएनन् । त्यो समाचार हेरेकी पत्नी लक्ष्मीले विष्णुलाई सुनाइन्, ‘हामी पनि हाम्रा दिवंगत छोराहरूको नाममा केही सामाजिक काम गरौं न ।’ त्यसपछि विष्णुको मन फेरियो । लक्ष्मीकै नाममा प्रतिष्ठान खोलेका उनीहरू अहिले अन्य बालबालिकामार्फत दुई छोराको सपना पूरा गरिरहेका छन् ।
चौंरीदेउरालीको धुसेनी शिवालयमा जन्मिएर काठमाडौं तिलगंगा बस्दै आएका पर्यटन व्यवयासी विष्णुको परिवार हाँसीखुसी चलिरहेको थियो । छोराछोरी पढाइपछि काममा लागेका थिए, परिवारको आम्दानीको स्रोत राम्रै थियो । छोरा कुमारले चलाएको ट्राभल एजेन्सी सन् २००८ मा देशमा सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने कम्पनी थियो । ०६५ पुस १२ विष्णुका लागि कालो दिन बनेर आयो । घर फर्कंदै गर्दा सवारी दुर्घटनामा कुमारको मृत्यु भयो । व्यवसायमा लागिसकेको परिवारको जेठो छोरा गुमाउँदाको पीडा त परिवारलाई छँदै थियो, तैपनि विधिको विधान भन्दै चित्त बुझाउँदै थिए । ०६६ असोज १७ मा फेरि उनीहरूको जिन्दगीमा ठूलै बज्रपात पर्‍यो । जेठो छोरा गुमाएको ९ महिनापछि विष्णुको परिवारले माइलो छोरा बलराम गुमायो ।
अमेरिकाको ओक्लोहामा युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत उनले गाडी हाँकिरहेका बेला मृगले बाटो काट्यो, बचाउन खोज्दा गाडी अनियन्त्रित भई दुर्घटनामा उनको ज्यान गुमाए । ‘अघिल्लो शोकबाट तंग्रिन नपाउँदै अर्को शोकमा पर्‍यौं, त्यसले हामीलाई मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनायो,’ विष्णु सम्झिन्छन्, ‘त्यसै कारण परिवार नै सिध्याउने सोचमा पुगेको थिएँ, श्रीमतीको निर्णय र सल्लाहले समाजसेवामा लाग्न प्रेरित गर्‍यो ।’
०६६ यता नै समाजसेवा सुरु गरेका उनीहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । आधारभूत विद्यालय रौतहट र कान्देश्वरी राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको भवन निर्माण गरिदिएका छन् । आठ सयभन्दा धेरैलाई सीपमूलक तालिम दिएका छन् । करिब आठ सय जनाको मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया निःशुल्क गराएको उनको दाबी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, महिला सशक्तीकरण, सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका उनीहरूले करिब दुई सय चेपाङ बालबालिकालाई ‘कुमार बलराम स्मृति छात्रावास’को व्यवस्था गरेका छन् । कान्दा रूपान्तरण अभियान नाम दिएका त्यहाँका बालबालिकाको शिक्षा र स्थानीयको आयआर्जनमा सघाएका छन् ।
विष्णुका अनुसार, चितवनबाट प्रकाशित एक समाचारले उनीहरूको ध्यान खिचेको थियो । समाचारमा विषालु च्याउ खाँदा एकै परिवारका आठ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख थियो । ७४ वर्षीय हजुरआमा र १८ महिनाको बालक मात्रै च्याउ नखाएको कारण बच्न सफल भएका थिए । उनीहरूलाई अनेकोटमा रहेको आफ्नो जग्गामा ल्याएर घर बनाएर राख्ने सोच पनि नबनाएका होइनन्, तर एकपटक नपुगीकन विष्णुको मनले मानेन । ‘त्यहाँ पुग्दा स्थिति अर्कै थियो । अर्धवस्त्र, नांगै धेरै थिए, तीन महिना पनि खान पुग्ने रहेछ,’ ती दिन सम्झँदै उनी भन्छन्, ‘खाना खाने भाँडाकुँडा पनि थिएन, पत्कर छरेर सुत्ने र बीचमा आगो बालेर न्यानो बनाउने गरिएको रहेछ, जंगली जनावर नै मारेर खाने गरिएकाले त्यति घना जंगलमा चराचुरुंगी समेत भेटिँदैनथे ।’ बाटो, बिजुलीसमेत नभएको विकट त्यो गाउँमा उनले धेरै मेहनत गरेर विकास पुर्‍याए ।
दुई स्थानमा छात्रावासलगायत विभिन्न सामाजिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको लक्ष्मी प्रतिष्ठानका लागि विष्णुले आफ्नो धेरै सम्पत्ति बिक्री गरिसकेका छन् । ‘म बस्ने एउटा घरबाहेक अब केही छैन,’ उनले भने, ‘रिसोर्ट चलाउन तयारी रहेको पाँचखाल नगरपालिकाको ४० रोपनी जग्गा संस्था चलाउनकै लागि २ करोड ३४ लाखमा बिक्री गरेँ, कम्पनी बेचेर आएको २२ लाख र आफूसँग रहेको ४९ लाख पैसा पनि संस्थाकै काममा खर्च भएछ, ८७ लाखमा किनेका दुई घडेरी पनि संस्थाकै लागि बिक्री गरेको हुँ ।’ सम्पत्ति सकिएकोमा उनमा चिन्ता छैन ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिष्ठानको गतिविधि थाहा पाउनेबाट सहयोग संकलन गरिरहेका उनले आफ्नो बेच्न मिल्नेजति सम्पत्ति बिक्री गरिसकेका छन् । तीन वर्ष आफ्नो सम्पत्ति बेच्दै संस्थाका गतिविधि सञ्चालन गरेपछि सहयोग पनि जुटेको छ । दुई सय बालबालिकालाई छात्रावास र संस्थाका अन्य गतिविधिमा वार्षिक डेढ करोडजति खर्च हुन्छ । दातामार्फत अहिलेसम्म करिब सात करोड बराबरको रकम सहयोग जुटाएका छन् ।
कान्दामा गरेको उनको काम देखेर बेलायत सरकारले सम्मान गरे पनि नेपाल सरकारले नदेखेकोमा उनको दुःखेसो छ । ‘दिनभरि हलो जोतेर आएको छोरालाई बेलुका बाबुले धाप मारे पनि आनन्द आउँछ रे,’ उनी भन्छन्, ‘तर सरकारले कुनै सहयोग गरेन । कान्दामा भएको विद्यालयलाई मावि बनाउने अनुमति दिएको भए एउटा छात्रावास चलाउँदा चलाउँदै अर्को चलाउन पर्दैन थियो ।’ सातभन्दा माथिका कक्षा सञ्चालन नहुने भएका कारण कान्दाका बालबालिका पढाइका लागि चौंरीदेउरालीस्थित सरस्वती मावि भर्ना भएका छन् । त्यहाँका घर भाडामा लिएर उनले छात्रावास सञ्चालन गरिरहेका छन् । सय जनासम्मका लागि पुग्ने संरचना निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०९:०२